Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » inkcubeko » UMnyhadala weFilimu wezoKhenketho kwiHlabathi lonke uza kuqala ngo-Okthobha 21
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba eziNqabileyo zaseNetherlands • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zaseUganda • Iindaba ezahlukeneyo
UMnyhadala weFilimu wezoKhenketho kwiHlabathi liphela uvula ngo-Okthobha 21
I-GTFF, uMnyhadala wefilimu woKhenketho wokuqala ohambahambayo uveliswa ukubanjwa ukuxhasa iindawo zokhenketho kunye noqoqosho lwasekhaya oluxhomekeke kukhenketho.
I-GTFF iveliswa ziinkokheli zecandelo lezokhenketho laseCanada naseMelika kunye neefilimu.
I-GTFF iqaphela abenzi bamabhanyabhanya bamanye amazwe kunye neemveliso ezibonwayo ezibonwayo ezihlanganisa ngokusisiseko kunye nokuqhubela phambili ulwazi lwendawo ekuyiwa kuyo.
Inxalenye yengeniso yeGTFF iyakwabelwana neziseko ezisebenzayo ezilungele ukuthethelela imigaqo-nkqubo yezokhenketho ezinzileyo.
UMnyhadala weFilimu wezoKhenketho kwiHlabathi liphela (i-GTFF) ngumnyhadala oqaqambileyo obonisa imiboniso bhanya-bhanya enegunya lokwazisa malunga nendima ebalulekileyo ekuyiwa kuyo kwiindawo eziyimpumelelo kumdlalo bhanyabhanya kunye nomabonakude. I-GTFF, uMnyhadala wefilimu woKhenketho wokuqala ohambahambayo uveliswa ukubanjwa ukuxhasa iindawo zokhenketho kunye noqoqosho lwasekhaya oluxhomekeke kukhenketho.
I-GTFF ithathela ingqalelo abenzi bamabhayisikobho bamazwe aphesheya kunye neemveliso ezibonwayo ezibonwayo ezihlanganisa ngokusisiseko kunye nokuqhubela phambili ulwazi lwendawo ekuyiwa kuyo. Iqhutywa yingxelo yemishini enamandla, imisebenzi ye-GTFF ibandakanya iindibano zocweyo zeshishini lemiboniso bhanyabhanya kunye neesemina zokuphonononga ukhenketho oluzinzileyo; abaphulaphuli abakhuthazayo ukuba bathathe inyathelo elifanelekileyo lokugcina.
Ushicilelo olululo lwe-2021 GTFF luveliswa ngokudibana kunye nenkxaso yoKhenketho lwaseNetherlands.
Umsebenzi woMnyhadala weFilimu wezoKhenketho kwiHlabathi jikelele:
Ukwamkela nokuvuza abenzi beefilimu abanetalente.
Ukubonisa iifilimu zikawonkewonke kunye neemveliso malunga neendawo zabakhenkethi kunye neemveliso.
Ukukhuthaza ezona ntsingiselo mvanje ekwenziweni kweefilimu zokhenketho.
Ukuthambekisa umdla weshishini labakhenkethi kunye neenkampani zemveliso ngokubhekisele kwimveliso yeefilimu zokhenketho.
Ukukhuthaza iingcali zeshishini lemiboniso bhanyabhanya ukuba ziguqule iinzame zazo kwaye zibalasele ekwenzeni ifilimu kwezokhenketho.
Ukutsala umdla weenkampani ezivelisa imiboniso bhanya-bhanya, amajelo eendaba, ukhenketho, kunye noluntu kwiqonga elinye.
Ukudala iimeko zomxholo wokwazisa osebenzayo.
I-GTFF iveliswa ziinkokheli zecandelo lezokhenketho laseKhanada nelaseMelika kunye neenkokeli zeshishini lemiboniso bhanyabhanya ezinembali ebonakalayo kwimiboniso bhanyabhanya nezoKhenketho kubandakanya nokuqeshwa kwiikhomishini ezilawulayo zefilimu nezokhenketho.
Ukusuka kwii-premieres zehlabathi ukuya kumatheko amabhaso, ukusukela ekuhlolweni ukuya kuthungelwano lweshishini elineziqhamo, ukusuka kukhuphiswano olunoburharha oluqhutywa yijurors yamanye amazwe, ukuya kwizithethi eziphambili, amathuba okuzalisekisa iimfuno zabathathi-nxaxheba ukuze baqonde ngcono kwaye babe yinxalenye yendlela yokwenziwa kweemovie zininzi.
Uluntu, ifilimu nezokhenketho ziya kuba nakho ukufikelela kwiindaba ezizezokuqala kunye nolwazi oluvela kubasemagunyeni bezokhenketho bamanye amazwe ngolwazi oluya kwindawo olunxulumene nomdlalo bhanyabhanya kunye nefilimu.
Ukongeza kuMnyhadala woMnyhadala weFilimu, i-2021 GTFF ibonelela ngokufikelela kubunzulu beesemina zeshishini kunye neeworkshops ezithunyelwa ngumzi mveliso. Iisemina zabenzi beefilimu zibandakanya ukunyusa imali yokuvelisa, ukwazisa ngefilimu, ukuhambisa kunye nokulahla izinto ezisisiseko. Iindibano zocweyo ezazisa ngemiboniso bhanyabhanya, ukubhala isikrini kunye nokusebenza kwekhamera ziyafumaneka kuluntu lwefilimu. Iisemina zokuya eNetherlands kunye IiBhodi zoKhenketho eUganda Ingakhokelela kwaye ivale imicimbi yolwazi.